Psychosomatics को दृष्टिकोण देखि सम्मोहन
प्रचारक वा भ्रामक यौन जीवन - कारणहरू र परिणामहरू
त्यसो भए कि यो पुरुषको प्रकृतिमा निहित थियो भन्ने विश्वास थियो, एक महिलाको दोषी र विभिन्न सजायको साथ दण्डित भएको थियो।
प्रचारक के हो?
Promiscuity प्रत्याशित यौन संभोग (लैटिन prōmiscuus - अनौपचारिक) को लागि एक आकर्षण हो। प्रलोभन को ऐतिहासिक जड़ पुरातत्व मा झूठ बोल्छ जब मान्छे आदिम सांप्रदायिक प्रणालिहरु मा रहछन, यद्यपि इतिहासकारहरुको यो धारणा पुरा तरिकाले पुष्टि छैन। आधुनिक मनोविज्ञान र यौन सम्बन्धले यो शब्दलाई व्यक्तिगतको धेरै यौन सम्बन्धको सन्दर्भमा उधारोयो। जीव विज्ञान आशावाद मा एक Coolidge प्रभाव को रूप मा वर्णन गरिएको छ: दायरा मा एक नया महिला को रूप पुरुष संग यसको जोडी संग खोज को कारण बनता छ।
प्रचार र निमफोमेनियाले के फरक पार्छ?
Promiscuity र nymphomania अवधारणाहरु हो कि अर्थ मा नजिक छ, उनि भ्रामक यौन संभोग मा आधारित हुन्छन्, तर मूल र कारणहरु को भिन्नता फरक छ। भिन्नता, प्रवृत्तता र निमिफोनिया को लागि सामान्य:
यौन प्रलोभनमा आफूलाई अराजकता यौन सम्बन्धमा प्रकट हुन्छ, तर प्रायः चेतनाले नियन्त्रण गर्छ। साझेदार विषयहरूको आकर्षण। निमिफोनिया एक आवेगजनक, अनियमित इच्छा हो जुन दिनको धेरै पटक हुन्छ, गम्भीर अवस्थामा 20 गुणा बढी हुन्छ। सेक्स, उमेर, सामाजिक स्थिति र साझेदारको आकर्षण महत्त्वपूर्ण छैनन्। पुरानो समयमा, निमिफोनियालाई "गर्भाशयका रानी" भनिन्छ।
विभिन्न यौन अभिविन्यासका मान्छेहरूमा दुवै यौनसम्पर्क हुन्छ। Nymphomania केवल महिलाहरुको लागि ठेठ हो।
प्रचार - एक संभोग संग समाप्त हुन्छ। निमिफोनिया - यी महिलाहरु प्रायः कठोर हुन्छन् र केवल मनोवैज्ञानिक भावनामा उत्साहित हुन्छन्। संक्रामक रूप मा शारीरिक निर्वहन उत्पन्न छैन, जो "अनन्त" असफलता उत्पन्न गर्दछ।
प्रचार - कारणहरू
मनोविज्ञानको दृष्टिकोणबाट पदोन्नतिले आफ्नै मानको अभावको कारणले गर्दा प्रत्येक झूटा पार्टनरको साथ "झूटो" निरन्तर पुष्टि हुनु पर्छ। एक सजग स्तरमा, यो महसुस गरेन, अधिक मानिसहरू मान्छे यो आदर्श हो र तिनीहरूले आफ्नो अभियान बारेमा कुरा गर्न, आफ्नो आफ्नै आँखामा आत्म-सम्मान बढ्न मन लाग्छ। कारणले लचीला व्यवहार बनाउँछ:
संक्रामक यौन अनुभव (बलात्कार, पहिले असफल यौन सम्पर्क);
asociality (एक व्यक्ति को जीवन को एक आक्रामक तरिका ले जान्छ);
साथीको धोखाले बदला लिने इच्छाको कारण हुन सक्छ: धेरै पटक एकपटक परिवर्तन गर्नुहोस् र व्यवहारले फ्युलोल्ड प्राप्त गर्न सक्दछ;
नयाँ यौन अनुभव खोज्नुहोस्;
मानसिक बीमारी (ओलिफोरेनरिया, schizophrenia)।
महिलाहरु जो कमजोरी को लागी संवेदनशील हुन्छन्, दिल मा धेरै कमजोर र कमजोर हो। प्रायः प्रायोजकताको जड गहिराइमा गहिरो हुन्छ, जब सुरक्षा र प्रेमको आधारभूत आवश्यकताहरु अगाडि बढ्दछन् र यिनी आवश्यकताहरु को असुरक्षाले उनीहरूको निष्ठा, सम्वन्धिकताको सही धारणाको उल्लङ्घन गर्दछ र महिलालाई धेरै पुरुषहरूको हातमा धक्का दिन्छ। महिलाको भित्री कारणका लागि अन्य कारणहरू:
क्यारेक्टर एस्पेन्टिभेशन: प्रदर्शनकारी र हेराइटर महिलाहरू गन्दाको सम्बन्धमा अधिक इच्छुक छन्।
हानिको डर। साझेदार वा धोखाधारीको मृत्युले महिलाको मनोविज्ञानमा नकारात्मक छाप लगाएको छ र उनीहरु महसुस वा संलग्न गर्न छनौट गर्दैनन्।
सन्तानको प्रजननका लागि उत्तम उत्पादनकर्ताको खोजी र चयनको पुरातन आनुवंशिक तंत्र।
निराशाजनक यौन सम्बन्ध पुरुषहरूको अधिक विशेषता हो। धेरै सम्भव साझेदारहरूलाई सम्पर्क गर्न चाहना, जीवित र प्रजनन को प्रवृत्ति संग समझाई जान सकिन्छ। ज्ञात तथ्य यो समलैंगिक यौन सम्बन्धको बीच उच्च स्तरको कमजोरी हो, औसतमा - 100 अनियमित सेक्स सम्बन्धी सम्बन्ध। आधुनिक संसारमा पुरुष पुरुषको भित्ताको कारण अधिक नाप हुन्छ र मनोवैज्ञानिक हो:
मान्यता र प्रशंसाको आवश्यकता
उत्कृष्टता को लागि प्रयास गर्दै;
शिशुवाद या अपरिपक्वता;
एक बलियो र स्थिर सम्बन्धको जिम्मेवारी लिन असहमति;
उच्च libido या hypersexuality;
कहिलेकाहिँ एक लत (धूम्रपान, शराब) देखि छुटकारा पाउँदा यस्तो आश्रित व्यवहारलाई त्याग्दैन, र एक नयाँ लतको गठन गरिएको छ - भंग व्यवहार।
वयस्कता को उद्भव मा वयस्कता एक कठिन अवधि हो, जब व्यवहार मा विभिन्न प्रकार (विचलन) व्यवहार को रूप मा संभव छ प्रकट हुन्छ। केटाहरु र लडकियों लाई अक्सर एक विशेष सामाजिक समूह मा स्थापित गर्न को लागि र साबित गर्नुहोस कि उनि "योग्य" उनि शराब र ड्रग्स को उपयोग शुरू गर्न सक्छन्, अपरिचित साथीहरु संग प्रचार कनेक्शन मा प्रवेश गर्नुहोस। Podriskovy सापेक्षता - मुख्य कारणहरु:
हार्मोनल "झटका" - उच्च स्तरको हार्मोनले खोजी गतिविधि उत्पन्न गर्छ।
यौन आघात - ईश्वरीय, बलात्कार।
प्रारम्भिक शराबकरण - पार्टनरहरूको अस्वस्थता र बारम्बार परिवर्तनलाई बढावा दिन्छ, प्रायः केटीहरूमा।
चरित्र को हाइपरथाइमिक उच्चारण - यी किशोर किशोरहरू दुर्व्यवहारबाट अलग हुन्छन्, विपरीत लिंग जस्तै, सम्पर्कहरू सजिलैसँग जोड्न र सजिलैसँग सम्बन्धहरू तोड्न सक्दछ।
अपरिचित लिङ्कहरू के हो?
समाजशास्त्र मा प्रचारक परिवार को संस्था को अस्तित्व को सीधी खतरा को रूप मा देखा जान्छ। धेरै शताब्दीका लागि नैतिक मूल्यहरू अपरिवर्तित छैनन्, जसमा परिवारले मानिसको लागि सबैभन्दा ठूलो मूल्यको प्रतिनिधित्व गर्दछ। बेवास्तात्मक जडानहरूको नतिजा मानिसजातिलाई चिनिन्छ र लगातार मास मिडिया र विशेष व्याख्यानमा राखिएको छ, तर मानिसको मनोविज्ञान यस्तो छ कि तिनले सोधे: "यो मेरो बारे होइन!"। परिणाम सधैं पछाडि छ। यो यी नतिजाहरूको सम्झना गर्न अति उत्तम हुनेछैन:
रोगले यौन रूपमा प्रसारित गर्यो। व्यापक समूह: हेपेटाइटिस बी, सी, साइफिलिस, एचआईभी, हेपेटिक संक्रमण। आधुनिक संसारमा, जब एंटीबायोटिक्स प्रभावकारी हुन बन्द हुन्छ, एक हल्का संक्रमण अपरिहार्य र पुरानो हुन सक्छ (ट्रेरिओमोनियसिस, गोनाोर)। कन्डमहरू सधैँ 100% प्रभावकारी छैनन्।
भरोसा र पारस्परिक समझमा निर्मित सामान्य सम्बन्ध निर्माण गर्न पुरुष र महिलाहरु लाई बनाउन सक्दैन। परिणाम: अधिक परिपक्व उमेर मा निष्ठा।
अनियोजित र अवांछित गर्भावस्था। आगामी परिणामहरू:
आत्मा र महिला गर्भनिरोधक शरीरलाई निको पार्दै;
बच्चा बिना बुबा बढ्छ र आमाको बोझ छ।
प्रचार - उपचार
प्रचारक एक रोग वा एक आदर्श छ? सेक्सविज्ञों र मनोचिकित्सकहरु को बीच, वहाँ एक विचार हो कि प्रचलित यौन जीवन को मानसिक विकारहरु को कारण हुन सक्छ। एक विशेषज्ञबाट सर्वेक्षणले यी कारणहरू स्पष्ट गर्नेछ। तीव्र प्रलोभन - निर्भर व्यवहार को एक लामो दबाइ र मनोचापेटिक सुधार आवश्यक छ, जो चिकित्सक द्वारा व्यक्तिगत रूप देखि चयन गरिन्छ।
गुदा सेक्स राम्रो र खराब छ
बिस्तारै मानिसलाई कसरी उत्प्रेरित गर्छ?
के म गर्भवती संग गर्भवती हुन सक्छु?
दुई पुरुषसँग यौन सम्बन्ध
पेगिंग - तरिकाहरू, प्रविधिहरू, प्रविधिहरू र विपक्षहरू
यौन विच्छेदहरू - भक्ति र paraphilia को प्रकार को प्रकार र कारणहरू
सेक्समा सुन्दर हुन्छ
किन पुरुषले यौन चाहँदैनन्?
पुरुषहरूको मनपर्छ पोष्ट
फिर्ता मालिश कसरी गर्ने?
आफैलाई गर्भवती देख्ने सपना किन?
राजकुमारी चार्लोटको क्याम्ब्रिजको सम्मानमा फूल भनिन्छ
बच्चाले मलहरूमा मलहरू छन्
के म हरेक दिन सूरजमुखी जान सक्छु?
चिकन र पनीर संग पाई
कद्दू पेस्ट्री - प्यारा उपचार को लागि सबै भन्दा स्वादिष्ट, नयाँ र मूल व्यंजनहरु
महिलाहरूको लागि मजेदार प्रतियोगिता
प्लास्टिक सर्जरी गिलियन एन्डरसन
न्यूरोडर्मेटाइटिस डिफ्यूज गर्नुहोस्
विद्यालयमा कुन विद्यालय संलग्न छ?
स्प्रिंग कोट 2014
जेरार्ड डिपर्डियू आफ्नो युवाहरु मा
केटाहरूको लागि नाप्पी
Rahat-lukum - क्यालोरी सामाग्री
सुन्दर स्नातकोत्तर कपडे 2014
लिलीक वालपेपर लिङ्ग कोठा को आंतरिक मा
एक रसदार स्कर्ट - फैशनेबल शाम र स्टाइलिश आरामदायक मोडेल संग ड्रेस गर्नुहोस्